Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Taiwan » Taiwan Miomana amin'ny fahatongavan'ny rivodoza mahery Chanthu
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Vaovao • Safety • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Nanfang'ao Harbour tototry ny sambo - sary nahazoana lalana avy tamin'ny CNA
A Typhoon Super - Chanthu - dia manao fikafika ho any Taiwan ary antenaina fa hihatra mivantana any Taipei rahampitso sabotsy 11 septambra 2021.
Ny rivodoza Super ankehitriny dia manana rivotra maharitra maharitra 180 mph ka mahatonga azy ho oram-baratra sokajy 5.
Ny lalan'i Chanthu dia mitarika azy mivantana mankany Taiwan sy ny tanànan'i Taipei.
Ny rivodoza Atlhough dia mahazatra an'ny firenena, antenaina fa hitondra rivotra sy orambe mahery ity tafio-drivotra ity, ka hiteraka tondra-drano mafy sy fihotsahan'ny tany mety hitranga.
Chanthu dia mahery vaika miaraka amin'ny rivotra maharitra maharitra 180 mph, ka mahatonga azy ho tafio-drivotra sokajy 5 mampidi-doza. Ireo metozista dia mijery am-pitandremana ny Super Typhoon Chanthu indrindra satria tsy hoe tsy namoy ny heriny tao anatin'ny andro vitsivitsy lasa izay, fa mihamafy hatrany.
Ny vinavinan'ny vinavina mialoha dia hoe hihalemy amin'ny tadio sokajy 4 i Chanthu alohan'ny hidirany any atsimon'i Taiwan. Rivodoza sokajy 4. Amin'ny fotoana handalovan'ny tafio-drivotra eo akaikin'ny tanànan'i Taipei dia heverina fa hahena ho tafio-drivotra sokajy 2 izy io.
Ny rivodoza Super Chanthu dia hitondra rivotra mahery sy oram-be amin'ny sokajy rehetra, manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 2. Ny rivo-doza dia ampahany amin'ny fanao mahazatra any Taiwan, na izany aza, i Chanthu dia mandeha amin'ny làlana tsy mahazatra izay mitondra izany amin'ny faritra misy ny mety hisian'ny fitomboan'ny fahafahan'ny maro fahasimbana. Ny oram-be mivatravatra dia mety hiteraka tondra-drano ary mety ho fihotsahan'ny tany.
Tao anatin'ny 2 andro monja dia nitombo 130 mph ny rivotra maharitra. Rivo-doza 5 hafa ihany no nandrakitra fanamafisana haingana toy izao, nifindra avy tamin'ny fahaketrahana fotsiny ho amin'ny tafio-drivotra sokajy 5 tao anatin'ny fotoana fohy, hoy i Sam Lillo, meteorologist an'ny Fitantanan-dranomasina nasionaly sy ny atmosfera (NOAA).
Raha ny filazan'ny Ivotoerana Rivotra Nasionaly amerikana, ny fanamafisana haingana dia faritana fisondrotan'ny rivotra maharitra maharitra 35 kilaometatra isan'ora farafahakeliny ao anatin'ny 24 ora. Ny akora sasany ilaina amin'ny fanamafisana haingana ny cyclone tropikaly dia misy ny mari-pana ambonin'ny ranomasina, ny habetsahan'ny hafanan'ny ranomasina (refin'ny mari-pana amin'ny rano ambanin'ny tany), ary ny fanety ny rivotra mitsivalana ambany.
Ny rano mafana dia miara-miasa amin'ny rivotra mafana mando, ary samy manome angovo sy hamandoana ho an'ny rivodoza. Ny tadin-drivotra mitsangana dia ny mahasamihafa ny hafainganana sy ny làlan'ny rivotra avo lenta sy ambony. Manety ny tampon'ireo rivo-doza mamely sy manalemy azy ireo ny volo avo, raha toa ka misy tafio-drivotra mahery.
Ny Birao mpamantatra ny toetrandro foibe (CWB) dia naminavina fa rehefa mikatona ny tafio-drivotra any Taiwan, dia hanomboka hiantraika any amin'ny firenena ny zoma hariva, hitondra orana any atsinanan'i Taiwan. Hihamafy ny orana sy ny rivotra amin'ny asabotsy, raha toa ny oram-batravatra any amin'ny faritra atsinanan'i Taiwan, Keelung City, ary ny Saikinosy Hengchun. ny Taiwanese dia miomana araka izay tratrany, miaraka amin'ny orinasa sy ny sekoly nakatona amin'ny fiandrasana ny fahatongavan'ny oram-baratra.